Hor-dhaca Doodda 2aad ee Dhexmaraysa Obama iyo Romney
Sunday, May 19, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 17:28
Jaamacadda Hofstra ee New York waxaa caawa oo Salaasa ah ka dhici doonta Dooddii labaad ee ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo Musharraxa madaxtinimo ee Xisbiga Jamhuriga Mitt Romney ee tartanka loogu jiro madaxtinimada Maraykanka.
Dooddan waxay bilaabmaysaa 9-ka habeennimo ee saacadda Washington oo u dhiganta 4-ta habeennimo ee saacadda Geeska Afrikada bari.
Falanqeyn la xiriirta dooda oo ay ka qeybqaadanayaan aqoonyahanno Somaliyeed oo labada xisbi kala matalaya oo ku doodaya barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo Madaxa laanta Afka Somalia Cabdiraxman Yabarow oo isna ka hadlaya halka hoose ka dhageyso.
Dhageyso Falanqada Doodda Caawa ee Mareykanka
Dhageytayaasheena waxaan la socod-siinaynaa in dooddan ay si toos ah uga daawan karaan websiteka VOASomali.com. Haddaba ha moogaan inaad doodad 2aad ee Obama iyo Romney si toos ah ugala socoto voasomali.com.